Arjen Robben oo diiday codsi kaga yimid Shiinaha – Gool FM
Arjen Robben oo diiday codsi kaga yimid Shiinaha
(Munich), 17 Jan 2017 –Xidigga garabka uga ciyaara kooxda Bayer Munich ee waddanka Jarmalka Arjen Robben ayaa maanta shaaca ka qaaday in uu ku gacan seyray codsi kaga yimid dhinaca Horyaalka Shiinaha oo lagu doonayay in lagu iibsado.
Robben oo 32 jir ah ayaa wada hadallo u socdaan isaga iyo kooxdiisa Bayer, taas oo uu ku doonayo in heshiiskiisa loogu kordhiyo sanad kale illaa June 2018.
“Waqti fiican ayaan la qaadanayaa Bayer Munich, waxaana u ciyaarayaa mid ka mid ah kooxaha ugu wanaagsan caalamka, ma doonayo in aan ka tago anigoo 32 jir ah” ayuu laacibka Holland u sheegay ‘Radio 538’.
“Inaad u wareegto Horyaalka Shiinaha ma ahan wax xiiso leh, waayo taas micneheedu waa in waayahaaga ciyaareed ay u dhamaatay, anigu waxaan doonayaa in aan sii wato ciyaarahayga oo u dheelo kooxaha ugu sarreeya intii karaankayga ah” ayuu sii raaciyay.
“Ma garanayo sababta ciyaartooy da’doodu tahay 27 iyo 28 ay u aadayaan Shiinaha, raggaasi waxay joogeen xilligii ugu wacnaa xirfaddooda ciyaareed, way isku ciyaareen, laakiin kuwa ka sarreeya 30 jirrada waan garan karaa micnahooda” ayuu sii raaciyay Robben.
“haatan xoogaa Waalli ah ayaa ka socota Shiinaha, waxay soo bandhigayaan dalabyo aad la rumeysan karin, anigu waxaan dalab ka helay Shiinaha, waxaana ay ii soo bandhigeen lacag afar, shan illaa lix jeer ka sarreeya mushaarka aan haatan ka qaato kooxdayda, laakiin lacag ma ahan ujeedkayga, kubadda cagta ayaan ka hor mariyaa wax walba” ayuu hadalkiisa ku soo geba gebeeyay Arjen Robben.
Napoli oo ku dhawaaqday in xidiggeedii hore ee Diego Maradona u magacaabi doonto Safiirkeeda laakiin waa marka uu...
Xiriirka kubadda cagta Ingiriiska oo Bacary Sagna ku ganaaxay qoraal uu soo dhigay bartiisa Instagram-ka